Ị maara otú e si eme backlinks na ụzọ SEO kacha mma?
Ọ dịghị mkpa ịsị na onye ọ bụla webmaster na onye nwe ụlọ ahịa na-azụ ahịa kwesịrị ịma otú e si eme backlinks na SEO - maka ịmalitekwu okporo ụzọ weebụ, n'ikpeazụ na-erite uru site n'ọkwá dị elu na SERPs. Ma gịnị na-eme ka profaịlụ SEO-enyi na enyi na akaụntụ ọ bụla ma ọ bụ blog? Nlekota oru na nlekota oru nke oma, nyocha, na nhazi ngwa ngwa ka ike nke mbu nke backlink bara uru di ichota ka ekwesiri imezi ya mgbe obula.N'okwu dị mfe, ozugbo azụ azụ malitere ịba uru ya, a ghaghị ịghagharịa ozugbo ma ọ bụ ozugbo ewepụ ya. Ya mere, otu esi eme backlinks na SEO? Ka anyi chee ya ihu - nke a ga-adi n'ihu. Eji ya mee ihe, ọ na-ejikọta njikọ ụlọ njikọ n'ozuzu ya na nhazi mgbe niile na usoro nhazi oge - redler grain silos converted.
Ihe Na-eme Ezi Backlink
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ọ bụla "ezigbo" backlink (ma ọ bụ nke ọzọ, eke ma ọ bụ organic) ga-esi na naanị weebụsaịtị ndị dị adị, blọọgụ , ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ntanetị. Ọzọ, isi iyi nke ezigbo backlink kwesịrị inwe akara ziri ezi na PR (pagerank), DA (ikike mpaghara), yana PA (ikike nke ibe). E kwuwerị, onye ọ bụla nwere ike ịmekọrịta na (ma ọ bụ weebụsaịtị ma ọ bụ blog) na-atụ anya ka ịnweta ọdịnaya dị mma, nke na-anapụta ezigbo uru nye ndị ọrụ ndụ.
O doro anya, ọdịnaya dị otú ahụ aghaghị ikwu ịnakwere ịkekọrịta na mgbasa ozi mgbasa ozi. Echere m na akwụkwọ edemede ndị a na-agwụ agwụ kwesịrị ịmalitegharịkwuo amamihe - ma ọ dịghị ihe ọzọ ka ha pụọ ​​na asọmpi ahụ - n'ime ụfọdụ ihe osise, chaatị, infographics, spreadsheet, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iji hụ ihe iji gosi ihe niile dị mfe. na ụzọ dị mma. Site n'ụzọ, reshaping gị ọdịnaya na ibe gị na ihe ọzọ enyi-enyi nwere ike ịghọ mkpebi ezi uche maka na gị na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog. Ya mere, itinye oge na mgbalị iji gbanwee ma ọ dịkarịa ala ọdịnaya dị ogologo, ma ọ bụ ma eleghị anya akụkụ kachasị njọ ọ dị oke egwu iji gụọ ma banye. N'ụzọ dị otú a, yana ụfọdụ ihe eji eme ka mmekọrịta enyi na enyi a dị mfe "digestible" ị nwere ike ọ bụghị nanị na ịmepụta ihe azụlinks, mbak, aha, na-edu na ndebanye aha - ma gbapụtakwu okporo ụzọ weebụ mgbe nile.
Otu esi eme Backlinks na SEO
na-adabere na atụmatụ ụlọ njikọ dị mma;
gbalịa iji ahụmịhe kachasị mma na ahịa ahịa dijitalụ;
nwere usoro nlele oge nyocha iji chekwaa backlinks gị - ma ọtụtụ ha na njikọ njirimara;
dee ederede ndị ọbịa ma ọ bụ posts blog iji mee ka ha bipụtara na ụfọdụ isi mmalite nke ndị ọzọ;
na-ejikọta weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ kachasị mma, nke ga-adabara nnọọ adaba na isiokwu azụmahịa gị, ahịa ntanetị, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na ụlọ ọrụ ndị mmekọ.
n'etiti otu ọgaranya ọtụtụ backlink nnyocha na aro ngwaọrụ, M nwalere Semalt Analyzer (Semalt), Open Site Explorer (Moz), na Majestic SEO toolkit na m na-adịbeghị anya ulo oru ecommerce webshop. E kwuwerị, ọ bụ naanị gị ka ị ga-esi ekpebi otu esi eme backlinks na SEO, na nke ọrụ ịntanetị iji gbalịa mbụ. N'ikpeazụ, echefula na njikọ ọhụrụ gị nwere ike ịpụta dị ka ihe na-abaghị uru. N'ezie, nyere na ị ga-ejikọta na weebụsaịtị ma ọ bụ blog, nke bụ n'ezie ike ọgwụgwụ na usoro nke SEO metrics karịa gị.